Toa manomboka mihetsika ny HomePod ary efa manana mpandahateny an-tapitrisany voalohany mivoaka avy amin'ny Iventec | Avy amin'ny mac aho
Toa manomboka mihetsika ny HomePod ary efa manana mpandahateny an-tapitrisany voalohany mivoaka avy ao Iventec isika
Inventec dia iray amin'ireo mpamatsy Apple roa izay manamboatra ny HomePod miaraka amin'ny Hon Hai Precision Industry, ary ity voalohany ity dia efa manana mpandaha-teny an-tapitrisany voalohany vonona handeha any amin'ny magazay Apple hanombohana amin'ny fomba ofisialy ny varotra.
Tamin'ny fiandohan'ity volana Janoary ity ihany, GBH dia nanambara ny mety hanombohan'ny Apple ny HomePod eo anelanelan'ny 4 sy 6 herinandro hatramin'ny fiandohan'ny taona ary azo inoana fa tsy diso hevitra tamin'ny faminaniany ireo raha marina ity fampahalalana avy amin'ny Iventec ity, na dia efa vonona ny handao ireo orinasa aza ireo singa voalohany.
Ny dingana dia tsy tsotra toy ny famoahana ny vokatra avy ao amin'ny orinasa ary manomboka mivarotra, izany no antony hanombanana fa ireo herinandro 4-6 voalaza etsy ambony ireo dia mety ho kely sisa ny fotoana. Tsy afaka milaza na inona na inona amin'ny fomba ofisialy isika satria i Apple no manana ny teny farany momba an'io, fa loharanom-baovao isan-karazany no mitaky an'ity singa voalohany an'ny HomePod ity novokarina ary natomboka, izay azo antoka fa dingana tsara.
Ny fanemorana ny famoahana HomePod dia mahatonga ny fifaninanana handray ny ankamaroan'ny mofomamy amin'ity fizarana ity izay anombohan'ny Apple vokatra. Noho io première première io dia misy mpandahateny iray izay tsy mandeha ny tsy fetezana ary manohy miasa izy ireo ka mifanaraka amin'ny fanantenana andrasana amin'ny fampisehoana azy io.
Etsy ankilany, voalaza fa ny totalin'ny HomePod izay ilain'i Apple mandritra ny taona 2019 hahatratra ny vola mitentina 10-12 tapitrisa unit, tarehimarika izay mihoatra lavitra noho izay ananantsika eo ambony latabatra ankehitriny raha marina izany. Raha fintinina, tsy maintsy mijery ny vaovao ianao manantena fa tsy ela loatra ny fahatarana amin'ny fanombohana ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Toa manomboka mihetsika ny HomePod ary efa manana mpandahateny an-tapitrisany voalohany mivoaka avy ao Iventec isika
Tim Cook dia mandefa mailaka mampahafantatra ny sasany amin'ireo vaovao amin'ity taona ity ao amin'ny Apple
Apple dia nahazo ny laharana fahenina amin'ny lisitry ny orinasa teknolojia miisa 100